pp umsonto inxeba lokucoca ulwelo iCartridge endaweni yeshishini 10inch 5micron umtya inxeba
Iimpawu zobuGcisa beCartridge yokucoca inxeba yocingo
Ulwahlulelo lwenxeba lokucoca ulwelo olwenziwe ngentsontelo yemisonto eyolukiweyo kumathambo amaninzi ngendlela ethile. Ngokulawula ukuxinana kwe-cartridge yeefilitha, iifriji zeefilitha ezinokuchaneka ngokuhlukileyo kungenziwa. Ukuhluzwa kwendawo yokuhluza iCartridge enkulu ngaphandle nangaphakathi encinci, ke inefuthe lokucoca elinzulu kakhulu.
Ulwahlulo lwenxeba lokucoca ulwelo lunokususa ngokufanelekileyo iziqwengana ezinqunyanyisiweyo kunye namasuntswana kulwelo. Imodeli eluncedo inezibonelelo zokuhamba okukhulu, ukulahleka koxinzelelo oluncinci, ubomi benkonzo ende kunye noxinzelelo oluphezulu lokucoca. Ngokobume bolwelo olucociweyo, iCartridge yokuhluza ineentlobo ngeentlobo zezinto ezahlukeneyo onokukhetha kuzo, ukuze iCartridge yokuhluza kunye nefiltrate zihambelane kakuhle.
Ukusebenza okuphambili kwecartridge yokucoca inxeba
1) Ukuchaneka okuphezulu kokuchaneka, umahluko koxinzelelo oluncinci, ukuhamba okukhulu, amandla amakhulu okungcola kunye nobomi benkonzo ende;
2) Indawo yokuhluza incinci ngaphakathi kwaye inkulu ngaphandle, enefuthe lokucoca elinzulu;
3) ICartridge yesihluzi yenziwe ngezixhobo ezahlukeneyo ukuqinisekisa iimfuno ezahlukeneyo zokuhluza ulwelo kunye nokufezekisa owona mphumo wokucoca ulwelo.
Intshayelelo emfutshane yokusonga itekhnoloji yecartridge yecrafti
Uluhlu lwenkxaso, ikhava yokuphela kunye nesilinda yangaphakathi nengaphandle yecartridge yokuhluza yenziwe nge-polypropylene. Indlela ekhethekileyo yokunyibilikisa ishushu ye-polypropylene iyamkelwa, kwaye akukho nto yokuncamathela kunye nomcimbi wangaphandle owayo.
Umsebenzi kunye neempawu eziphambili zokusonga iCartridge
Umahluko koxinzelelo oluphantsi, ukuhamba okuphezulu, ukuhlamba okuphindaphindiweyo, ubomi obude, ukuchaneka kokucoca okuhle kunye neendleko eziphantsi zoqoqosho zilungele ukuhluza kwangaphambili kunye nenkqubo yokuhluza ecocekileyo.
Isicelo esiqhelekileyo seqokobhe lokucoca ulwelo elisongiweyo
Ingasetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zomatshini ococekileyo wamanzi, izixhobo zokusela ngokuthe ngqo, isixhobo sokucoca, isicoci samanzi, umatshini wokusela osindisa amandla, umbhobho wokusela othe ngqo, njl. njl.
Izinto: Textile Fibre ezihamba
Enobubanzi engaphandle: 63.5 ± 1mm
Ububanzi bangaphakathi: 30mm / 28mm
Ubude: 10 ``, 20 '', 30 '', 40 '', 50 '', 60 '', 70 '', 80 ''
Uxinzelelo Max: 0.4Mpa
Ubushushu obukhulu: 60 ℃
Ukuhamba koyilo: > 500L / H.
Ixabiso le-PH: 1-13
50pcs / ctn / Ctn ubungakanani: 35 * 35 * 70cm / GW: 14Kgs / Ukupakishwa okukhuselekileyo komgangatho, inkosi ibhokisi
UMBONISO WAMANZI AMA-1
2. I-AQUATECH ARMSTERDAM
I-Wuhu Huaji Filtration Technology Co, Ltd ngumthumeli wefilitha okwe China. Yasekwa ngonyaka ka-2007, ke eneemfuno ezizodwa PP, zinyibilike nomoya, isebenze carbon, abalungileyo ifayibha inwebu lokucoca ulwenziwo kwimveliso, uphando kunye nophuhliso lweshishini yabucala sci-tech. Iimveliso zisetyenziselwa ukuhlanjululwa kwamanzi, ukucoca umoya kunye nefayile ye microfiber. Ikwasetyenziswa ngokubanzi kwi-elektroniki, imichiza, amayeza, i-petroleum electroplating, ukutya kunye namanye amashishini.
Inkampani yethu inezinto zobugcisa, imveliso ehambileyo kunye nezixhobo zokuvavanya. Ke sineseti yolawulo lwentengiso nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho kwinkqubo yemveliso.
Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso okanye ungathanda ukuxoxa ngomyalelo wesiko. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi. Sijonge phambili ekwenzeni ubudlelwane obunempumelelo kwezoshishino kunye nabathengi abatsha kwihlabathi liphela kungekudala.
1. Inkonzo ye-OEM iyafumaneka?
Ewe, inkonzo ye-OEM iyafumaneka, kodwa ixabiso lebrendi leHuaji lingcono kune-OEM.
2. Ixesha lokuhlawula
Singayamkela i-L / C, TT, D / A, D / P.
4. Ukuhambisa ngenqanawe
Ukuba iodolo yakho ayonelanga ngokwaneleyo, umnyango nomnyango wenkonzo ngowona khetho ulungileyo nge-UPS, FEDEX, DHL, EMS.
Kwisixa esikhulu, ngomoya okanye ngolwandle ngokudlulisa kwakho yindlela enye yesiqhelo.
Isampulu yethu isimahla kubo bonke abathengi. Kodwa ubungakanani zii-1-5pcs.
Umhla wokuhanjiswa kweesampulu ungaphakathi kweentsuku eziyi-1-2, uyilo lwabathengi malunga ne-3-10days.
Egqithileyo Uqinisekiso lomgangatho intengiso ephezulu ye-10 ”icartridge yokucoca amanzi
Okulandelayo: BIG T33 umsonto
Jumbo Polypropylene Icebo lokucoca ulwelo
Kk String Inxeba iCartridge
Kk Intsimbi yokuCoca iCartridge
Icebo lokucoca ulwelo lomtya wenxeba
Uluhlaza womluki wokucoca iCartridge eBlue Blue
Kk Isihluzi seCartridge, Kk Gac Cto Isihluzi seCartridge, Iifilitha zamanzi zeNdlu iphela, iCartridge yokucoca amanzi, Icebo lokucoca ulwelo emgceni, Isihluzi sePp Meltblown Cartridge,